Home Opinion MADASHA KALA-TASHIGA iyo TAFA-RAARUQA oo ku Baaqay in Dalka laga rido FOWDO!!
Odayaasha isu-baahaystay Madasha Wada-Tashigu waxay sheegeen inaanay haba yaraatee aqoonsanayn Sharcinnimada Xukuumadda M/weyne Axmed Silaanyo wixii ka dambeeya 26-ka Juun 2015-ka, maadaama ay Doorshadii Madaxweynennimadu ku qabsoomi weyday waqtigii loogu tala galay. Odayaasha Madashu in kastoo aanay haysan Awood Sharci iyo Cod Shacbi oo ay Maamul ama Gole-Xukumadeed ku soo dhisi karaan, haddana waxay ku baaqeen inay soo dhisi doonaan maamul ay ku magacaabeen ‘Xukuumad-ku-meel gaadh ah oo loo-dhanyahay’, taasoo bedeli doonta Xukuumadda hadda talada haysa. Dhinaca kalena waxay Bulshada JSL ugu baaqeen inay is abaabulaan oo ay ka tashadaan aayahooda iyo jiritaanka qarannimadooda!!
Distoorka Qaranka JSL wuxuu si cad oo aan muran lahayn u qeexayaa Awoodaha iyo Masuuliyadaha Haya’adaha kala duwan ee Qaranka. Haddaba, marka Gole aan Qaynuun ahaan jirin oo baal-marsan Nidaamka sharci ee Dalka ka jira ay ICLAAMIYAAN inay dhisi doonaan Xukuumad aan ku iman Codka Shacbiga, miyaanay taa macnaheedu ahayn in Odayaasha Madashu ay xaqirayaan Caqliga Suubban iyo Garashada Qumman ee Shacbiga JSL oo ay innagu leeyihiin: “Ma aqoonsanin Distoorka iyo Nidaamka Sharci ee Dalka ka jira ee aad Shacbiyahow u codayseen!! Ma aqoonsanin jiritaanka iyo Sharcinnimda Haya’adaha Distooriga ee dalka ka dhisan (Sida: Sharci Dejinta, Fulinta iyo Garsoorkaba)!!”Miyaanay taa macnaheedu ahayn in Odayaasha Madashu ay inna tusayaan heerka ay ka taagan yihiin Nidaamka dawladnimo ee dalka ka jiray muddo 24 sano ah, iyaga laftooduna ay qayb ka ahaayeen!! Miyaan loo qaadan karin in Odayaasha Madashu ay ku BAAQEEN (iyagoo kaashanaya Xisbiyada Mucaaridka ah ee magac-u-yaalka ah) in dalka laga rido FOWDO iyo INQILAAB, kaasoo ay u muddeeyeen wixii ka dambeeya 26.06.2015-ka!!??
2.Ujeedada iyo Ajendaha Madasha:
Madasha Wada-Tashiga oo haatan isu bedeshay Madasha-Kala Tashiga iyo Tafa-raaruqa Bulshada JSL ee ay nimanka odayaashi isugu habar-wacdeen (fikir, muruq iyo maalba), ma aha Gole waafaqsan Nidaamka sharci ee Dalka ka jira. Waa Madal Qaynuun ahaan aan jirin, sidaa darteed dhawaaq kasta oo ka soo yeedha iyo talaabo kasta oo Siyaasadeed oo ay qaadaan waxay si weyn uga hor imanaysaa Sharciga iyo Distoorka Qaranka, kaasoo lagu ansixiyey Afti Dadweyne. Odayaasha Madashu haba yaraatee ma aqoonsana Nidaamka Sharci ee dalka ka jira, ma aqoonsana jiritaanka iyo Sharcinnimda Haya’adaha Distooriga ee dalka ka dhisan, ma aqoonsana Xisbiyada Siyaasadda ee Qaranka midkoodna; Muxaafid iyo Mucaarid kuu doono ha ahaadee.
Odayaasha Madashu waxay arkeen awood-darrada iyo aqoon la’aanta ka muuqata kuwii uu Distoorka Qaranku awoodda buuxda u siiyey Shacbiguna codkooda ugu deeqeen (waa Xisbiyada Mucaaridkee) si ay u daba-galaan una toosiyaan gal-dalloolooyinka xagga maamulka ah ee Xukuumadda talada haysa. Odayaasha Madashu waxay arkeen aragti-gaabnida iyo kalsooni-darrada ka muuqata Xisbiyada Mucaaridka ah oo ah kuwii loo doortay si ay Ummadda ugu hagaan hannaanka xisbiyada badan, hormoodna u noqdaan isu-dheelli-tirka Siyaasadda Qaranka. Arrintani waxay keentay in Odayaashu labada Xisbi Mucaarid ay midkoodna ku biiri waayaan, taa beddelkeedana ay go’aansadeen inay samaystaan Gole aan haysan awood Sharci iyo Cod Shacbi midnaba.
Aasaaska iyo Jiritaanka Madasha Kala-Tashiga iyo Tafa-raaruqa Bulshada Ujeedada dhabta ah ee ka dambaysa iyo Ajendaha ay leeyihiin Nimankan Odayaasha ahi waxa lagu soo koobi karaa arrimahan soo socda:
• Abaabulka Aafo-Qaran oo ku wajahan in Shacbiga iyo Xukuumadda la iska horkeeno, si ay u dhacaan Fawdo iyo Kacdoonno Bulsho oo dhiig iyo dhagarba wata, dabadeedna Xukuumaddaba laga takhaluso!!
• Raadin Awood Qayrul Sharci ah oo Distoorka Qaranka baal marsan.
• Raadin Magac, Milge iyo Mansab Siyaasadeed oo aanu sharcigu u jideynin shacbiguna aanay u igman.
• Aargoosi siyaasadeed oo ku salaysan nacayb Qof ama Qabiil oo aad u qoto dheer.
• Bulshada nolol-wadaagta ah oo laga dhaadhiciyo sawir qaldan oo odhanaya: “Reer baa isku darsaday Awooddii Dawliga ahayd iyo tii Distooriga ahaydba, dadka iyo dalkuna bedbaaday u baahan yahay.”
3.Hadallo Meel ka dhac iyo Milgo-xumoba huwan:
Qof kasta oo leh Caqiido iyo Caqli, wuxuu yaqiinsan yahay in Awoodda, Magaca iyo Mansabkaba uu RABBI (SXWT) bixiyo. Sidoo kale, Distoorka iyo Shuruucda dalka ka jira iyo weliba Codka Shacbiga ayaa iyaguna muwaadinka mansab iyo awood sharciba huwin kara ama u igman kara. Wixii intaa ka baxsani waa qardajeex, fawdo iyo xaalad qar-qoosh. Wax badan baynu maqalnay iyagoo Odayaasha Madashu leh: “Dalkii meel xun buu marayaa ee ha loo gurmado.” “Hayaay!!, Ka soo kacaaay!! Madaxweynihii la doortay dalka kama taliyo, dad kale oo dano gaar ah leh aayaa taladii dalka afduubay.” Cay, Af-lagaado qaawan iyo shakhsi weerar aan loo meel dayeyn oo ku wajahan M/weynaha iyo qoyskiisa. Hadallada noocan ahi waxay meel ka dhac, maan-gad, milgo-xumo iyo karaamo darrabo ku yihiin caqliga suuban iyo garashada feyow ee muwaadinka iyo weliba magaca, sharafta, wadajirka iyo dareenka ummadnimo ee mideeya bulshada samaha jecel ee Jam.Somaliland.
Waxa nasiib darro inteeda leeg ah, in rag hadda ka hor loo haystay Haldoorkii Mujaahidiinta iyo Maan-hagii Ummadda ee la is lahaa dalkan iyo dadkaba cidi ugama lexejeclo badna, in maanta iyagii garba-duub looga hayo duminta dalka, tafa-raaruqa iyo kala-takoorka bulshada. Waxa nasiib darro ah in rag milge iyo maamuusba ummadda ku lahaa inay hadh iyo habeenba xusul-duub ugu jiraan siday u heli lahaayeen Awood, Magac iyo Mansab aan Sharci iyo Shacbi midna u igmanin!! Waxa nasiib darro inteeda leeg ah in rag dalkan ku leh abaal iyo taariikh mug weyni ay iyagii haatan duullaan ku yihiin oo ay dib u masaxayaan juhdigii, nafhuruddii iyo taariikhdii ay lahaayeenba. Hab-dhaqanka noocan ahi wuxuu tusaale fool-xun u yahay jiilka iyo da’yarta iyagu ku bar-baaray xornimada iyo madax-bannaanida ay Odayaasha Madasha laftoodu qayb ka ahaayeen.
Guntii iyo geba-gabadii, Gole Qayrul Sharci ah, hadal kasta oo ka soo yeedhaa wuxuu si weyn uga soo horjeedaa Distoorka iyo Shuruucda dalka ka jira!! Sidaa darteed waxaa la gaadhay waqtigii uu sharcigu shaqayn lahaa ee si cad wax looga qaban lahaa ficillada iyo dibin-daabyooyinka ay maleegayaan Madasha-Kala Tashiga iyo Tafa-raaruqa Bulshadu. In la sii eegtaana waxay halis ku tahay jiritaanka Qarannimada, Nabad-gelyada iyo wada noolaanshaha Bulshada.
Jam. Somaliland HA NOOLAATO